🥇 ukubalwa kwezikweletu zezikweletu
Isilinganiso: 4.9. Inani lezinhlangano: 714
Ividiyo yokubalwa kwezikweletu zezikweletu
Oda ukubalwa kwezikweletu zezikweletu
Ukubalwa kwezikweletu ezikweletini ye-USU Software kuhambisana ngokuphelele nemithetho yokubalwa kwezimali, ehlukanisa isikweletu, kuya ngesikhathi sokukhokha semalimboleko etholakele, ngokwesivumelwano, esikhathini eside - isikhathi sokukhokha isikweletu singaphezu kwezinyanga eziyi-12 , nesikhathi esifushane, lapho kufanele kukhokhwe isikweletu ngaphambi kokuphela kwesikhathi sonyaka. Ngaphezu kwalokho, ukubalwa kwesikweletu kumakhredithi atholakele kuhlelwa hhayi yilezi zigaba ezimbili kuphela kepha nababolekisi nababolekisi. Lokhu kunqunywa yisimo senhlangano efake le software, engasetshenziswa yinoma yiliphi iqembu esivumelwaneni semalimboleko, noma kunjalo, uma ucabanga, ukuthi isihloko sengxoxo ngamakhredithi atholakele, kanye nokubalwa kwawo kwemali, kusho ukuthi thina bakhuluma ngebhizinisi eligcina amarekhodi wemalimboleko etholiwe.
Ukulawulwa kwesikweletu samanje kumakhredithi atholakele kusungulwa ku-database yemalimboleko, lapho amakhredithi atholakele akha umlando wawo, kusukela osukwini lokufakwa kwesicelo, ukuvunywa kwalo okwalandela, nokudluliswa kwezimali kwi-akhawunti efanele, ukuthengiselana kwezikweletu kubhekwa imigomo kanye amanani okumele akhokhwe, ukukhokhwa kwamakhomishini, namaphesenti Ikhredithi ngayinye etholakele, ine-'dossier 'yayo ehlukile kule database enesimo esabelwe esiveza isimo samanje sesikweletu, futhi isimo, naso, sinqunywa umbala, lapho abasebenzisi bohlelo babheka khona ukugcwaliseka kwezibopho ukukhokha lesi sikweletu. Isimo sesikweletu semali mboleko esitholakele sinezimo eziningana, kufaka phakathi ukukhokha ngesikhathi esifanele, ukwephulwa kwezikhathi zokugcina zokukhokha, ukubambezeleka, ukuqoqwa kwenhlawulo, nokunye. Umsebenzisi uhlukanisa izimo ngokwezinga lenkinga yakhe, ngaphandle kokuchitha isikhathi evula idokhumende ngalinye ukuze azijwayeze ngesimo sesikweletu.
Ukuhlelwa kwesibalo sezikweletu kumalimboleko atholakele kufeza ngempumelelo omunye wemisebenzi yawo emikhulu - kusindisa isikhathi sabasebenzi futhi kubonise izinkomba zokusebenza ukuqinisekisa ukuhlolwa okusheshayo kwezinqubo zomsebenzi, okwenza kube nokwenzeka ukwandisa ukusebenza kahle kwezinqubo nokukhiqiza kwabasebenzi, inzuzo yebhizinisi, ngenkathi ihlela imininingwane ngokulula ngesikweletu kumakhredithi atholakele futhi ahlela izinqubo zokubalwa kwezimali kwawo. Ukufakwa kokucushwa kwesibalo sezikweletu kwizimalimboleko ezitholakele kwenziwa ngunjiniyela, ngemuva kwalokho kunikezwa isethulo esifushane sawo wonke amakhono wesoftware, okungekho kangako, okwenza kube nokwenzeka ukukhulula abasebenzi ekwenzeni imisebenzi eminingi yansuku zonke , ngokuyinhloko kusuka ekubambeni kwe-accounting nokubala. Ngakho-ke, le ndlela i-automated accounting system izokwenza kanjani lezi zinqubo ngokuzimela, inikeze ibhizinisi ngokunemba nangejubane lokucubungula idatha ezorekhodwa.
Ngaphezu kwalokho, abasebenzi abasabandakanyeki ekwakhiweni kwanoma yimiphi imibhalo. Ukulungiswa kokubalwa kwezikweletu ezikweletini ezitholiwe kuzenza zizimele, zisebenze ngokukhululeka ngemininingwane etholakala ohlelweni kanye nebhange lamafomu akhelwe kulo, elilungiselelwe ngokukhethekile ukwenza le misebenzi. Imibhalo ekhiqizwa ngokuzenzakalela ihambisana ngokuphelele nazo zonke izidingo, ihlangabezana nesicelo nenhloso, lokhu kuhlolwe ulwazi kanye nesisekelo senkomba, futhi esakhelwe ohlelweni lokubalwa kwemali, lapho kuqoqwa khona konke ukuhlinzekwa, imithethonqubo, izinkambiso, namazinga ukulungiswa kwezitatimende zezimali. Isisekelo senza ukuqapha okujwayelekile kokuvela kwezichibiyelo ezintsha emibhalweni ekhona yokulawula, ebheka futhi ilungise izilungiselelo ohlelweni uqobo lwayo ukuthola imiphumela esesikhathini ekubaleni nasekulungisweni kwemibhalo. Ukutholakala kolwazi kanye nesisekelo senkomba nakho kunikela ngesibalo sesibalo, esivumela ukubalwa okuzenzakalelayo njengoba umsebenzi ngamunye uthola inani lokubonisa ngokubheka amazinga asungulwe embonini futhi athulwe esisekelweni.
Isibopho sabasebenzisi sifaka ukusebenza okukodwa kuphela - ukwengezwa okufika ngesikhathi kuhlelo lokufundwa kwabo okutholwe ngenkathi kwenziwa izabelo zomsebenzi ngaphakathi kwekhono. Ngokwesisekelo sabo, uhlelo lokubala oluzenzakalelayo lwenza ukubalwa okusheshayo kwezinkomba zamanje ezihlobene noshintsho olwamukelwe, kwakhiwe kabusha incazelo yenqubo yamanje, ngakho-ke, inentshisekelo ekutholeni ngokushesha imininingwane eyinhloko neyamanje evela kubasebenzisi, ibashukumisela ukuba basebenze ngenkuthalo bamba iqhaza kwinqubo yokufakwa kwedatha ngokubala ngokuzenzakalela amaholo wezinga lomsebenzisi, ucabangela umthamo womsebenzi obhaliswe kumalogi womsebenzi kagesi. Ngasikhathi sinye, abasebenzisi basebenza ngamafomu e-elekthronikhi, imininingwane efakwe kuyo ibhalwe ukungena ngemvume, okutholwa yiwo wonke umuntu kanye nephasiwedi evikelayo ukufaka lolu hlelo ukuze kuvikelwe imfihlo yolwazi olusemthethweni, ngakho-ke kuthwala imininingwane umthwalo wekhwalithi yedatha yabo kanye nokufika ngesikhathi kokufaka kwabo ohlelweni.
Ngaphezu kwesisekelo samakhredithi, i-CRM yethulwa njengesisekelo samakhasimende, lapho kuhlelwa khona ukubalwa kwezimali kokuxhumana nabo, umlando oningiliziwe woxhumana nabo uhlanganiswa kusukela ngesikhathi sokubhaliswa. Ifayela ngalinye liqukethe idatha yomuntu siqu, oxhumana nabo, ingobo yomlando yamadokhumenti, izithombe, kanye nohlu oluningiliziwe lomsebenzi owenziwe ngezinsuku - izingcingo, izincwadi, imihlangano kanye nokukhishwa kwemalimboleko. I-CRM ibuye igcine konke ukunikezwa okwenzelwe iklayenti, imibhalo yokuthumela okuthunyelwe, amakhophi omazisi, nesithombe esivela kwikhamera yewebhu sinamathiselwe.
Ukuqinisekisa ukuxhumana kwangaphandle, imisebenzi yokuxhumana nge-elekthronikhi ngezindlela ezahlukahlukene - i-Viber, i-SMS, i-imeyili, izingcingo zezwi, ezisetshenziselwa ukuxhasa ukuposa nokwazisa. Iklayenti laziswa ngokuzenzakalela ngokuya ngezinsuku zokuvuthwa ezichazwe ku-database yesikweletu. Kukhona isikhumbuzi sosuku nenani lokukhokha, ukwaziswa kwenhlawulo. Ukuthumela imeyili kuhlelwe ngezinjongo zokukhangisa ukukhuthaza izinsizakalo nangezindlela ezahlukahlukene, kuya ngesizathu esikhethiwe sokusekela ukuxhumana - ngawodwana, ngobuningi, naseqenjini elihlosiwe.
Imibhalo ekhiqizwe ngokuzenzakalela ifaka noma yiluphi uhlobo lokubika, kufaka phakathi ezezimali, ezezimali, ezezibalo nezimpoqo, inkontileka ejwayelekile, nama-invoyisi. Lapho wenza isicelo sesikweletu, lolu hlelo luzenzela ngokuzenzakalela isivumelwano semalimboleko ku-MS Word nemininingwane yamakhasimende efakwe kuyo nemibandela yemalimboleko evunyiwe. Lapho ufaka isicelo sesikweletu, uhlelo lubala ngokuzenzakalela inkokhelo kubhekwa inani lenzalo, lishintshe inani lalo lapho izinga lokushintshashintsha linyuka, uma imali mboleko ikhishwe kuyo. Uhlelo oluzenzakalelayo lugcina izibalo kuzo zonke izinkomba, kufaka phakathi inombolo yezicelo ezivunyelwe nezinqatshiwe, ezivumela ukuhlela okuhle. Ngokuya ngezibalo zezibalo, ukubikwa kwangaphakathi kuyakhiwa ngokuhlaziywa kanye nokuhlolwa kwazo zonke izinhlobo zomsebenzi, okwenza kube nokwenzeka ukuthuthukisa ikhwalithi yabo nokuqinisekisa ukukhula okunenzuzo.
Ukuhlaziywa kwezinkomba zamanje kusivumela ukuthi sihlole ukusebenza kwamakhasimende esikhathini esithile, ukufunwa kwemali mboleko, ukusebenza kahle kwabasebenzi, ukuphambuka ohlelweni lokukhokha, kanye nesikweletu esiyinhloko. Ukubika okuhlaziywayo kwethulwa ngendlela elula nebonwayo - amatafula, imidwebo, kanye namagrafu abonisa ngeso lengqondo ukubaluleka kwenkomba ngayinye ekwenzeni inzuzo. Ukuhlaziywa kwezinsizakusebenza zezezimali kukuvumela ukuthi uhlole ikhwalithi yephothifoliyo yekhredithi, unqume ukufaneleka kwezindleko ngazinye, ukukhomba izindleko ezingakhiqizi zezinqubo nenani lezikweletu.
Ukufakwa kohlelo kwenziwa ngabasebenzi be-USU Software. Ukuphela kwesidingo samadivayisi wedijithali uhlelo lokusebenza lweWindows. Ngemuva kokufakwa, kunesethulo samakhono wesicelo sokubalwa kwezikweletu zezikweletu.